E27 80 Watt Led Corn Lens Frosted Lens China Manufacturer
Nkọwa:80W Ọkụ ọka,80 Watt Led Corn Light,Led Corn Light Bulb E27
Home > Ngwaahịa > Led Corn Bulbs > Led Corn Lamp > E27 80 Watt Led Corn Lens Frosted Lens
MGBE Ị GA-EME: Ịchebe 85% na ego gị! Bbier 80W Ọkụ ọka na- enye ezigbo ngbanwe nke 250w na-enye gị ohere site na ntanye ọkụ 80 watt.
MGBE A GA-EKWU NDỊ: 80 Watt Led Corn Light nke a pyramid zuru okè maka iji ya mee ihe na mgbochi ndị nwere ike ịkwado ya, nnukwu ihe ndị na-eme ka mmiri dị elu na ndị dị elu. Led Corn Light Bulb E27 nwere ike ịmepụta ebe dị ọcha na-egbukepụ egbukepụ dị ka halogen bulbs.
MGBE Ị GA- ECHICHE AKA: Nke a e duhiere ọka ọka nwere usoro ihe nrịta na usoro ihe eji eme ihe, ozugbo n'ebughị oge ọ bụla. Oge okpomọkụ na-erughị 0,5 sekọnd. Ọ naghị edochi anya, ọ naghị ahụ ọkụ, ma ọ bụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ flickers!
AKWỤKWỌ NDỊ KWURU ECHICHE (CRI> 80): E gosipụtara ìhè dị omimi na ìhè nkịtị na ihuenyo dị kilogram 360 nke nwere ọtụtụ idei mmiri. Maka nchebe gị, nchịkọta ọka nchịkwa e27 anyị niile bụ ndị enyi na enyi, Ọ dịghị ụzọ ma ọ bụ Mercury, Mba UV ma ọ bụ IR Radiation.
AHỤRỤ AHỤRỤ: Ọ bụla anyị na- edu ọka e27 na-agbaso CE, RoHS na ETL DLC asambodo.
30W E27 Ọka Kpị na-acha ọkụ ọkụ 4000K Kpọtụrụ ugbu a
480v 40w Led Corn Bulb E39 E40 Kpọtụrụ ugbu a
80W Ọkụ ọka 80 Watt Led Corn Light Led Corn Light Bulb E27 40W Ọkụ ọka 100w Ọkụ ọka 80W Ọkụ bọmbụ Ọkụ ọka E27 Ọkụ ọka 120w